Posted by Tranquillus | Agoosto 18, 2021 | Shabakada
Da'du gabi ahaanba ma aha caqabad ku ah barashada luqad shisheeye. Hawlgabyadu waxay haystaan ​​wakhti ay ku qaataan waxqabad cusub oo kiciya. Dhiirrigelintu aad bay u badan yihiin faa'iidooyinkoodana waxaa lagu arkaa muddada gaaban iyo sidoo kale mustaqbalka fog. Caqligu ma wuxuu la yimaadaa da'da? Kan ugu yar waxaa loo yaqaanaa “isbuunyada carrabka” laakiin marka aad weynaato, waxaad awood u leedahay inaad falanqayso dhibaatooyinkaaga iyo daciifnimadaada oo aad si dhakhso leh uga gudubto si aad u hesho natiijo ka dhalata filashooyinkaaga.
Da'dee ayaad ku baran kartaa luqad shisheeye?
Waxaa inta badan la sheegaa in carruurtu ay si sahlan u bartaan luqad. Tani macnaheedu ma tahay in dadka waayeelka ah ay dhibaato weyn kala kulmi doonaan barashada luqad shisheeye? Jawaab: maya, helitaanku si fudud buu u kala duwanaan doonaa. Sidaa darteed waayeelka waa in ay sameeyaan dadaal kala duwan. Daraasadaha qaarkood waxay sharxaan in da'da ugu habboon ee lagu barto luuqad shisheeye ay noqon doonto marka uu yahay ilmo aad u yar, inta u dhexeysa 3 iyo 6 sano, maxaa yeelay maskaxdu waxay noqon doontaa mid soo dhaweyn badan oo dabacsan. Baarayaasha Machadka Teknolojiyadda Massachusetts (MIT) waxay soo gabagabeeyeen in barashada luuqaddu ay aad u adag tahay wixii ka dambeeya 18
Da'dee ayaad ku baran kartaa luqad shisheeye? Waayeelka ayaa marag fura! Oktoobar 15th, 2021Tranquillus
READ Fasaxa lacag bixinta, RTT, CDD: waxa loo shaqeeyahaagu sameyn karo ilaa Juun 30, 2021
horeBilaash ah Excel: Waa maxay sababta iyo sida loo qaboojiyo qolka xisaabinta?
socdaDooro dhammaadka saxda ah ee jumladda emaylka, laakiin sidee baad u mareysaa?